जो "धन्य आत्मा मा गरिब छन्" मतलब?
मान्छे मुठभेड, को अर्थोडक्स आज्ञा अध्ययन एकदम बुझ्ने छैन आधुनिक मानिसलाई विचार। जो "धन्य आत्मा मा गरिब छन्" मतलब? यी शब्दहरू अहिले कारण dissonance छन्। आखिर, सबै स्रोतबाट हामी यसलाई विकास सफलता हासिल गर्न आवश्यक छ भनेर देखाउँछ। मान्छे व्यावसायिक कौशल को उत्पादन गर्न, तर पनि आध्यात्मिक वृद्धि गर्न मात्र होइन धक्का भइरहेका छन्। यो यति मा, इच्छा को बल हुर्काउन प्रयास, लगनशील भई लागिरहेमा र हो। र त्यसपछि, "धन्य गरिब आत्मा हो।" यो अभिव्यक्ति कसरी बुझ्न, यो के भन्नुहुन्छ? गरेको छानबिन गरौं।
हामीलाई गरिब गर्न हेरौं
शायद यो सबैभन्दा सुखद अनुभव छ, तर यो गरिब मानिसको मनोविज्ञान तल्लीन गर्न आवश्यक छ। पहिलो आज्ञा हो: "धन्य तिनीहरूको स्वर्गको राज्य हो, आत्मा मा गरिब छन्।" कसरी? येशूले अनुसार, यो जीवन मा केही छ जसले मान्छे, सिर्जना, उत्पादन छैन, स्वर्ग को ढोकाहरू खोल्न। यो विरोधाभास एक प्रकारको छ जस्तो देखिन्छ, तर केवल आज मानव समाज को प्रभाव विषय। येशूले अन्यथा गरीब देख्यो। त्यसैले बोल्न छ जो, तल एक, कुनै महत्वाकांक्षा छ। उहाँले मात्र यसलाई प्रस्ताव भने, कुनै पनि मद्दत स्वीकार गर्न तयार छ। त्यो मानिस कुनै गर्व साधारण मान्छे मा निहित। उहाँले घाटा डराएका छैन। उहाँले मात्र जीवन छ। यो मानिस आफूलाई त अरूलाई न्याय गर्दैन नगण्य ठान्नुहुन्छ। उहाँले एक सरल ब्याज बसोबास। आज, रोटी र पानी छ - राम्रो। यो मैले प्रभु धन्यवाद। र यदि त्यहाँ केही राम्रो मान्छे को सहायता आउनेछ जब, त्यसपछि, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। भिखारी छैन नै elevates, उहाँले समाज माथि खडा गर्ने प्रयास गर्दैन। सम्पत्ति क्षति, वा काममा समस्या बारेमा सामान्य चिन्ता अज्ञात यो मानिस। आफ्नो प्राण onerous सम्पत्ति परेशानी र अनुभव मुक्त छ।
के तपाईं कहिल्यै हाम्रो समाज विकास छ जसमा निर्देशन बारेमा विचार? पछिल्लो शताब्दीमा भने, मुख्य धन को मूल्य विश्वास मान्छे, अब प्रतिभा र अधिक महंगा भयो। कसरी, ज्ञान उत्पन्न गर्न अन्यको साथ साझेदारी चिन्ने जो कोहीले, संपन्न छ। तिनीहरूले पनि येशूले यसो भन्नुभयो: "आत्मा मा गरिब छन् धन्य ..." यो वाक्यांश प्रतिभा प्रभु सङ्गति परे आफ्नो क्षमता मूल्यांकन गरेनन् भन्ने सुनिश्चित गर्न अभिप्रेरित छ। हाम्रो कौशल राजधानी छ, हामी यसलाई एक बच्चा छ भनिएको छ। यो गलत केही तपाईं अरूको हानि तिनीहरूलाई प्रयोग छैन भने त्यहाँ छ। आखिर, प्रभु यो ठाउँ विकास आफ्नो सुधारिएको भूमि सन्तानहरू गर्ने क्षमता, दिन्छ। यो किनभने तपाईं कसरी थाह र अरूलाई भन्दा बढी छ गर्व महसुस गर्न महत्त्वपूर्ण छ। पापले प्रतिभा को deprived निम्ति घृणा छ। यो आध्यात्मिक सहित सबै क्षमता, लागू हुन्छ। त्यहाँ अविश्वसनीय बुद्धि छ, अरूलाई कसरी नेतृत्व गर्न थाहा मानिसहरू हुन्। तिनीहरूले निरन्तर गर्व को प्रलोभन लड्न छन्। प्रभुमा विश्वास राख्न सक्षम हुन - "। आशिष् गरिब आत्मा हो" मतलब तपाईं मनमा राख्न आवश्यक: त्यहाँ केही परमेश्वरको एकता भन्दा बढी बहुमूल्य छ। म नै यो महसुस - यो करार पूरा छ। र एक जो, सँगै प्रभु, प्रलोभन देखि, सुरक्षित गर्व लगायतका।
"आत्मा मा गरिब छन् धन्य": व्याख्यालाई
ख्रीष्टियन मुख्य सद्गुण नम्रता ठान्नुहुन्छ छ। यो आशा छ प्रभुमा मात्र मान्छे छ। उहाँले तिनलाई के वा प्रस्ताव गर्न, दिन को लागि केहि प्रयास गर्दैन। यी सम्बन्ध मा मोलतोल त्यहाँ कुनै ठाउँ छ। क्रिश्चियन पूर्णतया र unconditionally उसलाई विश्वास, परमेश्वरको भलाइ लागि आशा। आफ्नो प्राण शुद्ध र निष्कपट छ। यसलाई त्यहाँ एक शङ्का कुनै छाया छ। नम्रता - सबै दुनिया मा लिन सक्ने क्षमता छ। यी देखि प्रभुको हात उपहार हो। त्यहाँ खराब कुरा थियो भने, तपाईंले परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्नुपर्छ र गनगन छैन। त्यसैले, अब तपाईंले थप योग्य छैन। र पाठ्यक्रम, तपाईंले जीवनमा के प्राप्त, हरेक बिट लागि "धन्यवाद" भन्न आवश्यक छ। सबै पछि, गरिब भन्दा बढी कुनै पनि व्यक्ति को राम्रो। हामी तिनीहरूलाई noticing रोकियो यी उपहार त accustomed छन्। र यो गर्व, पाप हो। आफैलाई सोधेर कसरी बुझ्न "आत्मा मा गरिब छन् धन्य", भनेर भुइँमा प्राप्त आनन्द ध्यान केन्द्रित गर्न प्रयास गर्नुहोस्। कि कस्तो छ? एक उदाहरण दिन गरौं।
हाम्रो जीवनमा के राम्रो छ?
रूसी भाषा बोल्ने संसारमा जीवित औसत व्यक्ति लिनुहोस्। यो लगभग हरेक दिन हुन्छ? भन्छन्, नकारात्मक, वितरण मिडिया संग मिलेर केही समस्या र समस्याहरूको? र हामी तपाईंलाई शायद मूल्य भएनन् छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन प्रयास गर्नेछ:
हावा, बाँच्न गर्न अनुमति दिएको छ जो;
समर्थन र आमाबाबुको मद्दत;
खाना र आवासको;
यदि काम गर्ने इच्छा छ, काम;
ज्ञान को स्रोत, यदि आवश्यक;
मित्र को समर्थन;
बच्चाहरु छन् क्षमता।
मलाई विश्वास छ, सूची अनन्त छ। तर मानिसहरूले यी उपहारहरू मूल्यांकन गर्छन्? तिनीहरूले प्राकृतिक विचार गर्नुहोस्। र यो के मतलब?
कृतिध्नता को नतिजा
पनि, हामी लामो तर्क छैन। यहाँ तर्क र बाँकी यो अंदाजा छन् देखाउन भनेर केही चेन हो:
एक आश्रय र आय भएको जो कोहीले उसलाई गुमाउने डर छ। उहाँले डाँकुहरूको युद्ध, आर्थिक संकटहरूको, र थप डराएका।
सम्भव रोगबाट बारेमा सोच मन नपराइएको संग स्वस्थ मान्छे।
आमाबाबु, परिवार, साथीहरू, विश्वासघात र मृत्यु को डर भइरहेको।
काम र प्रतिभा साकार वा स्थानमा मौका गुमाउने डर।
यो सूची पनि अनन्त विस्तार गर्न सकिन्छ। हामी उदाहरणका लागि मात्र भन्दा साधारण कुरा गरे। बस अर्को समय जसको अर्थ "धन्य आत्मा मा गरिब छन्", प्रभुको उपहार विचार, यो विचार। त्यहाँ भाग्य बाहिर छन् जो मानिसहरू हुन्। तिनीहरूले कुनै वा स्वास्थ्य, वा प्रतिभा, वा शान्तिपूर्ण आकाश छ। तिनीहरूले भुनभुनाना गर्छन्?
आफ्नो जीवनमा के सारा भन्दा बढी बहुमूल्य छ?
सायद प्रश्न अनुभवहीन, उपशीर्षक मा खडा। सबैलाई आफ्नै मान छ। यो साँचो र झूटो नै समय छ। छन् सार्वभौमिक मान। तिनीहरूले पूर्ण खण्डन गर्नु गाह्रो हो। विश्वासी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रभु नजिक रहन छ भन्ने विश्वास गर्छन्। मलाई विश्वास छ, धेरै विपरीत प्रमाणित गर्न प्रयास गरेका छन्। यो यति लामो समस्या नभएसम्म बाहिर गरियो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो छ कि छ - र केवल मानिस सबैभन्दा उच्च समर्थन भनेर बुझे, शोक बाँचे। प्राण सबै पछि कुनै एक शक्ति पुल हुनेछ। यो शासक वा मिडिया, साथीहरू र शत्रुहरू को राय स्वतन्त्र छ। यो तपाईं अस्वीकार गर्ने वा स्वीकार, तर यसको अस्तित्व बारेमा विवाद थिएन दिइएको छ। यो परमेश्वरको प्रेम गर्न आज्ञा हो - त्यसैले, "आत्मा मा गरिब छन् धन्य"? पूजाहारीहरूले रिमाइन्डर बरु भन्नुहोस्। यो संसारको निष्ठा र एक को आफ्नो क्षणिकताबारे र एकै समयमा बारेमा छोटो दृष्टान्त छ।
म आधुनिक मानिसलाई यो सत्य चाहिन्छ?
यसलाई फेरि नम्रता सम्झन गर्न प्रस्तावित छ। यो जो, वास्तविक लाभ र बेफाइदा आफूलाई हेर्न मूल्याङ्कन गर्न अनुमति दिन्छ साँचो बुद्धि छ। र एक पटक तपाईं के तपाईंको मूल्य थाहा छ, शक्ति आवेदन को लागि सही क्यारियर कसरी चयन गर्न थाहा छ। साथै, मान्छे पर्याप्त आफूलाई मूल्याङ्कन, संचार, प्रेम समस्या छ र reciprocity हुन्छ गर्दैन। उहाँले खुसी छ! र तपाईं कुनै पनि लागत मा सफलता को लागि प्रयास गर्न आवश्यक छ भन्छन्। सधैं अनमोल आफ्नो सृष्टिकर्ता प्रेम गर्ने सबै माथि मान्छे, छ, आत्मा मा गरिब छन् भनेर सम्झना। तिनीहरूले प्राण मा धेरै कम डर र द्वन्द्व छ। त्यहाँ हामी भरोसा गर्न सक्छन् जसलाई मा छ। र त्यो कहिल्यै धोका हुनेछ परिवर्तन छैन परिमार्जन वा धोका हुनेछ। उहाँले को सार छ मानव प्राण।
तपाईंलाई थाहा छ यदि frailty तपाईं सजिलो र थप प्राकृतिक बाँच्ने तपाईं धन र बौद्धिक मान सक्दछन्। गर्व द्वारा उत्पन्न डर बारेमा भूल कम्तिमा एक दिन प्रयास गर्नुहोस्। यो सानो प्रयोग तपाईं फिर्ता तपाईंको बाल्यकाल गर्न हुनेछ। विश्वास छैन यो, तर बच्चाहरु - यो व्यावहारिक साँच्चै छानबीन वाक्यांश बुझ्न मानिसहरूलाई मात्र श्रेणी छ। तिनीहरूले पूर्ण तिनीहरूलाई प्रभुको रूपमा देखेर, आमाबाबुको विश्वास, कुनै चिन्ता छ। तपाईं सम्झना?
प्राचीन धर्म। धर्म को उद्भव, पुरातन विश्वास
नयाँ यरूशलेम विहार फोटो र समीक्षा। Istra नयाँ यरूशलेम विहार: प्राप्त गर्न कसरी
निको लागि Sarov प्रार्थना को Seraphim
Trooditissa विहार (साइप्रस, Troodos): विवरण, इतिहास र रोचक तथ्य
पुजारी Parhomenko Konstantin: जीवनी
घरमा तामा सिक्का कसरी सफा गर्न
मम्पहरू। लक्षण, उपचार, रोकथाम
"बटुआ" (भुक्तानी प्रणाली), निर्देशन, समीक्षा
Khmelnytsky राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (KNU): ठेगाना, संकाय, Rector। वनस्पति उद्यान KNU
विशेषता "व्यवस्थापन" - आधार र sektrety
Violets पाना को प्रजनन: विशेषज्ञ सल्लाह